Rebranding: Ahoana no hampitomboana ny marika amin'ny orinasanao ny fandraisana ny fanovana | Martech Zone
Rebranding: Ahoana no hampitomboana ny marika amin'ny orinasanao ny fandraisana ny fanovana
Zoma, Oktobra 29, 2021 Zoma, Oktobra 29, 2021 Yuliia Mamonova
Tsy lazaina intsony fa ny fanavaozana marika dia mety hiteraka vokatra tsara ho an'ny orinasa. Ary fantatrao fa marina izany rehefa ireo orinasa manampahaizana manokana amin'ny famoronana marika no voalohany namerina marika.
Manodidina ny 58% amin'ny masoivoho no mamerina marika ho fomba iray hanamafisana ny fitomboana amin'ny alàlan'ny valan'aretina COVID.
Association Trade Agency Advertising
We at Lemon.io efa niaina mivantana ny habetsahan'ny fanavaozana marika sy ny fanehoana marika tsy miovaova dia afaka mametraka anao ho eo alohan'ny mpifaninana aminao. Na izany aza, nianatra ny fomba sarotra ihany koa izahay fa na dia tsotra aza ny fanavaozana marika, dia mihoatra noho ny famolavolana logo na fahazoana anarana vaovao fotsiny izany. Fa kosa, dingana mitohy amin'ny famoronana sy fitazonana ny maha-izy azy vaovao izany — mampita tsy tapaka ny hafatra tianao hifaneraseran'ny mpanjifanao amin'ny marikao.
Ny marika tsara amin'ny sehatra rehetra dia mampitombo be ny fidiram-bolan'ny fikambanana hatramin'ny 23 isan-jato.
LucidPress, Toetran'ny marika tsy miovaova
Ary ity dia tsy lazaina afa-tsy vitsivitsy. Amin'ity lahatsoratra fohy sy mihatra amin'ny teboka ity, dia hitarika anao amin'ny fizotran'ny fanavaozana marika izahay, hizara torohevitra, hanambara ny fandrika mahazatra ary hampiseho aminao ny fomba hisorohana azy ireo.
Ny tantaran'ny Lemon.io Rebrand
7 segondra monja vao mahazo fahatsapana voalohany.
Midika izany fa mety ho fito segondra ihany no azonao handresena lahatra mpanjifa mety hifidy anao amin'ny fifaninananao. Na dia sakana ho azy manokana aza izany, dia vao mainka sarotra ny mandresy lahatra hatrany ny mpanjifa mba hifidy anao hatrany. Izany fahatakarana izany no nitarika antsika ho amin'ny fahombiazana ataontsika ankehitriny.
Avelao aho hamela anao vetivety momba ny tantaran'ny lemon.io.
Lemon.io dia novolavolaina tamin'ny 2015 tany am-boalohany rehefa ny mpanorina (Aleksandr Volodarsky) dia namaritra ny elanelana eo amin'ny niche mpikarama freelancer. Tamin'izay fotoana izay, ny marika no zavatra farany tao an-tsaintsika. Tahaka ny ankamaroan'ny orinasa vaovao, nanao fahadisoana izahay tamin'ny fiandohan'ny dianay, ny iray tamin'izy ireo dia nanome anarana ny tenanay hoe "Coding Ninjas." Minoa ahy, nety tsara ilay izy tamin'izany fotoana izany satria nalaza izy io, ary nametraka ny ankamaroantsika tamin'ny famoronana votoaty izahay.
Na izany aza, nahazo fifohazana tsy misy dikany izahay rehefa hitanay fa nihena ny fitomboan'ny fandraharahana ary ny votoaty fotsiny dia tsy ampy ho an'ny fahombiazan'ny orinasanay. Nila mihoatra noho izany izahay mba hahatongavana any amin'ny tontolon'ny fandraisana mpiasa mahaleo tena mifaninana. Tamin'izay no nanombohan'ny tantaran'ny fanavaozana ny anaranay.
Betsaka ny lesona mampientam-po azonay tamin'ny dianay fanavaozana, ary manantena izahay fa, rehefa mitantara ny tantaranay izahay, dia mety haka vitsivitsy ihany koa izay hahasoa ny marikao.
Nahoana no nilaina ny fanavaozana marika
Mety hanontany tena ianao hoe nahoana izahay no tsy maintsy namerina anarana sy ny maha zava-dehibe izany.
Eny ary, ankoatry ny hoe efa lasa lavitra ny vanim-potoanan'ny Ninjas sy Rockstars izahay ary nizara anarana toa voalohany tamin'ny sekoly fandaharana any India, dia nahatsapa ihany koa izahay fa mila mihetsika izahay mba ho tafavoaka velona amin'ny tsena mahaleo tena mifaninana. Mifanohitra tanteraka ny tsenan'ny tsena mahaleo tena vetted ka ny hany fomba hisongadina dia ny fananana marika matanjaka sy kintana.
Tamin'ny voalohany, nino izahay fa ny tsy fahombiazanay dia noho ny famolavolanay, ary haingana dia haingana izahay nanatona mpamorona ary nangataka azy hanova ny bilaogy, izay nolaviny tamim-pahalalam-pomba ary nanolo-kevitra ny hanova anarana tanteraka. Izany no fantsika farany tao amin'ny vatam-paty, ary tamin'izay fotoana izay dia niharihary ny filana fanavaozana. Raha ny marina, tsapanay fa tsy manana marika mihitsy izahay, ary noho izany dia mila mamorona iray izahay. Mbola iray amin'ireo fanapahan-kevitra sahy sy mahafa-po indrindra noraisinay amin'ny maha-fikambanana anay izany.
Mianara avy amin'ny Lemon.io
Ity misy sombitsombiny amin'ny fomba nanatanterahanay ny dingan'ny fanavaozana marika. Tsy feno ny tari-dalanay; na izany aza, dia ho malala-tanana araka izay tratra izahay amin'ny fampahalalana avy amin'ny traikefanay. Ity misy famintinana ireo dingana narahinay:
Namorona persona marika sy mascot marika izahay – Ny fifandraisana misy eo amin'izy roa dia toy izao: Ny maha-marika anao no mpilalao fototra amin'ny tantaranao, izay hiatrika sakana amin'ny lalana mankany amin'ny tanjony. Ny mascot marika dia iray izay hanampy azy ireo handresy ny zava-tsarotra rehetra ary hahatratra ny tanjony. Raha ny tena izy, ny persona marika dia maneho ny mpihaino kendrena antsika na ny mpanjifa, ary ny mascot dia maneho antsika izay tanjona dia ny hamaha ny olany.
Nahita sarintany Fanapahan-kevitra momba ny fividianana Brand Persona (BPBD) izahay - Ny sarintany BPBD dia ny lisitry ny antony hanery ny mpihaino kendrena hividy zavatra aminay ary koa ny antony mahatonga azy ireo tsy hividy. Nanampy anay hahatakatra ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana ny persona marika anay izany ary hahafantatra izay fihetsika mety hampihemotra azy ireo. Tafiditra ao anatin'ilay dingana ny fitanisana ny antony hividianan'ny mpihaino kendrena antsika.
Matrix essence marika – Ity no toerana misy ny ascenseur an'ny marikay izay nitantara ny anton'ny fisian'ny orinasanay. Mampiseho ny zavatra ataon'ny orinasantsika izany ary mampita ny soatoavina marika.
Tantara momba ny marika - Ny tantaran'ny marika dia nitarika anay tamin'ny anarana mety indrindra, izay noraisinay tamin'ny farany.
Vokatra fanavaozana ny Lemon.io
Ny tombontsoa tsy azo tsapain-tanana avy amin'ny fanavaozana dia ahitana ny nahatonga azy ho fahatokisana, aingam-panahy, fahatsapana misy dikany sy tanjona, tsy lazaina intsony ny fidiran'ny fitarihana.
Ary mazava ho azy, ny zava-dehibe indrindra dia ny fiantraikan'ny fanavaozana marika eo amin'ny farany ambany. Ny fomba tsara indrindra hanehoana izany dia amin'ny alalan'ny tarehimarika satria tsy mandainga ny isa.
Tena nahafinaritra ny vokatra ary nahita anay nahatratra 60% ny tontalin'ny tontalin'ny fifamoivoizana azo tao anatin'ny dimy taona teo aloha tao anatin'ny folo volana nanombohana ny marika Lemon.io.
Ny fanavaozana tanteraka dia nahita anay nifindra avy amin'ny mpitsidika 4K ho 20K amin'ny salan'isa amin'ny volana tsara indrindra. Nahatratra avo 5 heny ny isan'ny mpitsidika sy ny varotra izay nahatonga anay ho amin'ny GMV 10M tamin'ny 2021. Jereo ireto fanehoana an-tsary momba an'io fitomboana io:
Talohan'ny: Fanodinana ny fifamoivoizana Ninjas hatramin'ny niandohan'ny orinasa ka hatramin'ny fanavaozana:
Taorian'ny: Fandrosoana vita tao anatin'ny sivy volana taorian'ny fanavaozana ny marika.
Rahoviana ianao no tokony hanova anarana raha vao manomboka ianao (mifototra amin'ny traikefa Lemon.io)?
Ny fotoana dia ny zava-drehetra. Mitaky asa be sy mandany loharanon-karena be ny fanavaozana marika, ary zava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra kajy.
Rahoviana no fotoana tsara hanaovana fanavaozana?
Ao amin'ny Lemon.io, fantatray fa tonga ny fotoana hanovana ny endriky ny orinasan'ny fikambananay rehefa:
Tsy nahomby izany! Ny fanamarinana lehibe indrindra nataonay tamin'ny fanavaozana ny marika dia ny fahatsapana fa tsy mitondra vokatra irina ny marikanay ankehitriny. Aminay, ny fifamoivoizana voafetra izay azonay teo ambanin'ny "Coding Ninjas". Nino izahay fa tsy maintsy nanatsara ny atiny izahay mandra-pahitanay tamin'ny farany fa diso toerana izahay teo amin'ny tsena, ary mila manavao anarana izahay mba hisongadina.
Nisy fiovana lehibe teo amin'ny orinasanay - Mivoatra hatrany ny orinasa. Raha miova ny orinasanao na nanova ny demografika marika tianao ary te-hiditra amin'izany amin'ny fomba mahomby kokoa, dia mety ho safidy ny fanavaozana marika. Talohan'ny nifindrana tao amin'ny Lemon.io, dia namorona marika azo tsapain-tanana sy personas mpanjifa hafa izahay, izay nanampy anay hanao safidy tsara kokoa sy hikasika ny toerana mety.
Talohan'ny nalaza be izahay – Nanana tombontsoa namerina marika izahay talohan'ny nalaza tamin'ny anarana teo aloha. Tsy azo lavina fa mitombo ny loza ateraky ny fanavaozana ny marika miaraka amin'ny fitomboan'ny laza. Alohan'ny hamantarana anao dia ambany ny risika satria zara raha tsikaritry ny olona.
Nanana loharano ampy izahay - Ny fanovana marika dia loharanon-karena, noho izany dia tsara izany raha efa manana orinasa ianao izay nahazo loharano ampy hanombohana ny dingana fanavaozana.
Rahoviana no tsy fotoana mety hamerenana marika?
Tsy tokony hatao mihitsy raha tsy misy antony marim-pototra ny fanavaozana marika. Fantatrao fa tsy mety ny antony manosika anao hanova anarana raha avy amin'ny fihetseham-po fa tsy ny zava-misy.
Leo amin'ny famolavolana logo? Ny fahasorenana dia antony mahatsiravina amin'ny fanavaozana marika. Satria tsy hitanao intsony ilay logo fa tsara tarehy dia tsy midika fa tsy maintsy manova azy ianao. Ny vidiny dia tsy mendrika ny tombontsoa.
Rehefa tsy misy fiovana ao amin'ny fikambananao - Raha tsy misy fiovana lehibe ao amin'ny fikambananao dia tsy misy dikany ny fanavaozana marika. Tsy ilaina ny manova rafitra efa miasa.
Satria ny mpifaninana aminao dia mamerina marika ihany koa - Tsy ilaina ny mandeha miaraka amin'ny vahoaka. Ny fanapahan-kevitra momba ny fanavaozana marika dia tokony hiorina amin'ny filanao manokana sy ny fahatakaranao ny tanjonao maharitra sy ny foto-kevitra ankapobeny.
Rebranding ho fampiasam-bola ho avy ho an'ny orinasanao
Zava-misy tsy azo iadian-kevitra fa na dia eo aza ny fandaniana lehibe amin'ny fotoana sy ny loharanon-karena mandritra ny dingan'ny fanavaozana dia fampiasam-bola foana ny fanavaozana ny marika amin'ny ho avy. Ny farany dia manamarina ny hustles rehetra tafiditra amin'ny dingana. Araka ny efa nasehontsika teo aloha, ny isa dia manondro fitomboana lehibe amin'ny varotra taorian'ny nanovantsika anarana. Ny dingana dia tsara ho an'ny farany ambany sy ny sarin'ny orinasa.
Mampitombo ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny ankapobeny ny fanavaozana marika mahay, mampiroborobo ny toerana mazava, ny fivoaran'ny tsena vaovao sy ny sehatry ny asa.
Ny dingan'ny fametahana marika na fanavaozana dia asa mavesa-danja miavaka amin'ny avo sy ambany kokoa noho ny hita amin'ny tantarantsika. Mitaky drafitra amim-pitandremana, fotoana marina, ary loharanon-karena ampy mba hahazoana izany ary hamorona marika tena hanao fanambarana, hanatsara ny fidiram-bolanao ary hanatsara ny sarin'ny besinimaro. Ny fanavaozana ny marika koa dia midika hoe manao fanatsarana mba hifanaraka amin'ny fotoana.
Tags: fikambanana ara-barotra masoivoho dokam-barotraBPBDmarikamarika mascotny fanapahan-kevitry ny fividianana marika personalemon.iolucidpressrebranding
Miaraka amin'ny 5+ taona amin'ny varotra nomerika, Yuliia dia mitondra fiara Lemon.iony fitomboan'ny miaraka amin'ny asa sorany sy hafatra mazava. Mpanoratra sady mpikaroka am-po i Yuliia, mahatakatra ny fomba hifandraisana amin'ny mpamaky sy hananganana tantara iray miavaka. Yuliia dia nanoratra lahatsoratra mihoatra ny 1500 tao anatin'ny taona vitsivitsy izay nanova ny tontolon'ny FinTech, ny fanombohana ary ny varotra votoaty miaraka amin'ny fahaizany.